Ọnọdụ menu. Gini bu menu menu ihe na gini ka odi | Akụkọ akụrụngwa
Ihe atụ menu
Taa, anyị ga-ahụ Kedu ihe menu menu na ihe ọ bụ maka. Anyị ga-ahụkwa etu menu ihe ndị gbara ya gburugburu si agbanwe dabere na ọnọdụ nke cursor ahụ na ihuenyo ahụ maka maka obi ike na ahụmịhe karịa, m ga-enye ozi gbasara otu esi gbanwee menu gburugburu site na ịgbakwunye ma ọ bụ wepụ ihe si na ya. Ka anyị bido site na nkọwapụta “onodu menu”.
1 Gịnị bụ onodu menu?
2 Gịnị bụ onodu menu maka?
3 Windows XP desktọọpụ onodu menu
4 Contextual menu nke faịlụ
Gịnị bụ onodu menu?
Ọnọdụ menu nas windo na-emepe ma anyị pịa aka nri oke. Nchịkọta nhọrọ a bụ ihe dị ndụ nke sistemụ arụmọrụ ebe ọ gbanwere site na ịgbakwunye ihe ọhụrụ na menu onodu ka anyị na-etinye mmemme ọhụrụ.
Ọ bụghị ihe niile mmemme anyị wụnye tinye ọcha na onodu akuku ọ ga-ekwukwa na ọ dabara nke ọma, ebe ọ bụ na uzọ ọzọ, menu a ga-eto n'ụzọ gabigara ókè, na-egbochi isi ọrụ ya. Gịnị bụ isi ọrụ nke onodu menu?, na-agụ:
Gịnị bụ onodu menu maka?
Ọnọdụ menu na-arụ ọrụ iji kwado ọrụ anyị kwa ụbọchị na kọmputa anyị. Mgbe anyị mepere menu gburugburu site na ịpị aka nri na bọtịnụ nri (n'aka ekpe ma ọ bụrụ na ị hazie ya maka lefties) anyị na-enweta windo nke enwere ọtụtụ nhọrọ dịka ịmepụta folda ma ọ bụ nweta ụzọ, ịpịkọta faịlụ, na-egwu mp3s gị, na-enyocha faịlụ na antivirus, wdg, na anyị nwere ike ime ihe a niile ozugbo ma na-enweghị imeghe mmemme ahụ na mmemme ahọrọ tupu oge eruo.
Dịka m kwuru na mbụ, dabere na mpaghara ihuenyo gị nke ị na-emepe menu okwu, ọ ga-eweta otu akụkụ ma ọ bụ ọzọ dị iche na ihe ndị ọ na-egosi ma ọ bụ nwere na menu ya. Ka anyị leba anya n’ihe atụ ụfọdụ.
Windows XP desktọọpụ onodu menu
Ọ bụrụ na anyị pịa aka nri na bọtịnụ nri na mpaghara n'efu nke desktọọpụ anyị ga-enweta na menu ndị a:
N'ime ya ị ga-ahụ ihe niile ị nwere ike iji ihe ndị dị na desktọpụ gị rụọ, dị ka ịhazi ya akara ngosi. Ọ bụrụ na anyị tinye cursor ahụ na ihe ọ bụla menu nke nwere akụ n'akụkụ ya, menu ọdịda ọzọ ga-apụta dị ka ị pụrụ ịhụ na foto dị n'elu.
Ọ bụ ezie na anyị na-ekwu maka menu onodu nke Windows XP, nke a dịkwa ka Windows 7 na Windows 10. N'agbanyeghị eziokwu na emelitere usoro a maka afọ ndị a niile, menu ihe ndị gbara ya gburugburu ka dị ma nwee ọrụ yiri ya na niile nsụgharị.
Contextual menu nke faịlụ
Ọ bụrụ na anyị pịa a file onodu menu ga-adị iche dabere na ndọtị nke ahụ nwere faịlụ ahụ (usoro ya). Dịka ọmụmaatụ, nke a bụ menu menu nke faịlụ na ndọtị PDF.
Na menu a anyị na-ahụ ihe ndị na-apụtaghị na onodu akuku site na desktọpụ Windows, dị ka nhọrọ "Nyochaa ..." iji lelee antivirus na faịlụ PDF enweghị nje ma ọ bụ egwu ndị ọzọ amaara. Anyị nwekwara ike ịhụ mmewere "IZArc" nke na-emepe menu nke abụọ nke anyị nwere ike iji mpikota onu PDF faịlụ site na iji Compressor IZArc.
Mana dịka m kwugoro, menu a ga-adịgasị iche dabere na ụdị faịlụ anyị kpọrọ ya. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na anyị mepee menu gburugburu site na ịpị aka nri na faịlụ .DOC (faịlụ Okwu) kama na faịlụ .PDF, anyị na-enweta menu menu ndị a.
Dịka ị pụrụ ịhụ, menu a bara ụba karịa nke gara aga ma gụnyekwa nhọrọ iji bipụta na nchịkọta nhọrọ nke ọzọ ewetaghị.
Anyị nwere ike ịchọta ọtụtụ dị iche iche onodu menusAnyị ahụworị ụfọdụ mana ọdịiche dị na-enweghị njedebe, n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mmemme niile anyị ga-ahụ menu nhọrọ okwu iji nyere anyị aka rụọ ọrụ ngwa ngwa na-enweghị ịnyagharịa site na ngwa ọrụ nke mmemme ọ bụla. Ya mere, anyị ga-ahụ ihe atụ ndị egosiri.
Achọrọ m ịkọwa taa ihe menu okwu gbara gburugburu na ihe ha bụ maka na n'ụzọ ahụ na nkuzi nkuzi n'ọdịnihu, m ga-atụ aka na ha ma ọ bụrụ na mmadụ amaghị ihe nchịkọta nhọrọ okwu, ha ga-akwụsị ebe a iji nweta echiche.
Maka ndị chọrọ ịmatakwu banyere menus gbasara ọnọdụ, a ga m agwa gị na ọ ga-ekwe omume ịdebanye ha n'akwụkwọ site na ịtinye ma ọ bụ wepụ ihe site na ya. Ọ bụ ezie na ụfọdụ n'ime arụmọrụ ndị a nwere ike ịme ngwa ngwa, ndị ọzọ dị mgbagwoju anya ma gafee ogo isiokwu a. Bọchị ọzọ anyị ga-ahụ otu esi eme ụfọdụ nfe mgbanwe na onodu menu. Maka ugbu a na ndị chọrọ ịnwe njikwa zuru oke na menu okwu, ana m akwado ka ị gụọ a isiokwu banyere onodu menu, ma jiri ịdọ aka ná ntị doro anya, a naghị atụ aro isiokwu ahụ maka ndị ọrụ novice na ndị ọrụ na-enweghị uche ka ị ga - ejigharị ihe ndekọ Windows iji gbanwee menu ndị gbara ya gburugburu. N'aka nke ọzọ, ana m akwado ka onye ọ bụla nwere ọtụtụ ahụmịhe lee anya na isiokwu na ibe nke Erwind ried.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » software » Akuko menu
Ndewo, achọrọ m ịsị na e mebere ibe a nke ọma ma nwee olile anya na ha ga-aga n'ihu na-eme ka peeji dị mfe nghọta ma kọwaara anyị otu ị si eme ya, ekele ma kelee gị maka itinye oge gị n'ịmepụta ibe ka anyị ndị ọrụ nwee nke kacha mma
Obi dị m ụtọ na ihu akwụkwọ a masịrị m, a na m ezitere gị ekele kachasị ekele maka okwu ọma gị.
ị ga-enwe akụkụ nke onodu menu
ekele maka ozi ahụ served ọ bụụrụ m ọrụ ahụ 'ekele'
heyy daalụ maka ozi ọ jere m maka ọrụ ahụ ... ekele
hey cunt nyere m aka n'ọrụ ụlọ m… amara
Ndewo, echere m na blọgụ gị amaka.
Mana enwere m nsogbu na menu ihe omume nke PC m ma achọrọ m ịgwa gị maka ya iji hụ ma ị ga - enyere m aka. Ọ na - eme na mgbe ị mepee MiPC ma pịa aka nri na diski diski ọ bụla, ma ọ bụ diski ike, eriri USB ma ọ bụ cd, kọmpụta anaghị azaghachi ma ọ naghị emepe menu okwu. Mana ọ bụ naanị na MyPC, n'ihi na folda ahụ ma ọ bụrụ na ị mepee onodu menu. Nwere ike inyere m aka biko ???? Amaghị m ihe m ga-eme ma ọ bụ otu esi achọ enyemaka maka nsogbu a.
mkpuru !! dijo
imeela nnọọ maka enyemaka a
ị kwesịrị na nke ahụ nyere m aka nke ukwuu
maka ihe omumu komputa m
na iche na ọ dị mfe n'ihi na ị nwere ike i copyomi
by: mkpuru :);)
Zaghachi ka mkpuru iche !!
@Pao yikarịrị ka onye nchịkwa sistemụ nwere nhọrọ nke nwere nkwarụ. Ọ bụrụ na ọ bụ naanị gị na-eji kọmputa, ị nwere ike ịnwe virus.
Ndewo: Enwere m mmasị na ibe gị. M rutere ya n'ihi na m nwere nsogbu na onodu menu; lee ma ị ga-enyere m aka:
Ana m edekọ faịlụ olu na igwe okwu. Ọ ga-amasị m nke ahụ, mgbe m ga-ekepụta otu, ka m nwee ike mepụta ya na menu ihe nchekwa folda, pịa '' Ọhụrụ '', na nke ahụ, ebe m nwetara faịlụ Ọhụrụ, ma ọ bụ faịlụ PowerPoint ọhụrụ , Ana m enweta nhọrọ faịlụ olu ọhụrụ, ma ọ bụ wav, iji nye ya aha, mgbe ahụ, iji nwee ike imeghe ya ozugbo site na mmemme ndekọ, na-enweghị ịzọpụta ma kpọọ ya mgbe ahụ.
Nke ahụ ga - ekwe omume, n ’ihi na ọ na - arụ ọrụ (nke ahụ bụ windo 2000), mana n’ụlọ, ọ nweghị (Enwere m Vista). Daalụ maka ibe gị, enwere m olileanya na, na mgbakwunye na m, ajụjụ na azịza ya nwere ike ịmasị ọhaneze.
Ọ dị mma, amaghị m etu esi eme ihe ịchọrọ Damian. Ekwadoro m ịme ọchụchọ Google dị ka "tinye ụzọ mkpirisi na menu nhọrọ" ma ọ bụ "ụzọ mkpirisi ihu igwe menu" iji hụ ma ị nwere ihu ọma.
HEY Daalụ maka ozi O nyeere m ezigbo aka na ọrụ
Grace jeere m ozi ọtụtụ ihe ma nọgide na-aga
eta nke igba hahahaha ekele maka ihe omuma
Ejighi m inf a kama agbanyeghị
Ọ bụrụ na ndị ọzọ na-eji kọmputa, akaụntụ gị nwere ike oke na ịnweghị ikikere imeghe menu ihe dị na nkeji. Ọ bụrụ na ọ bụ kọmputa nke gị, ọ nwere ike ịbụ nje ma ọ bụ malware. Gafere antivirus na antispyware.
Ọ dị mma, eziokwu bụ na amaara m ihe nke ahụ bụ n'onwe ya, ọ bụrụ na m pịa bọtịnụ ziri ezi iji nweta nke ahụ na ojiji ya na ndị dị otú ahụ, mana amaghị m na a na-akpọ ya, ọ dị ka ihe nye m, mana anaghị m 'amaghị ihe.
Ọfọn, ọ nyeghị m aka mana ọ dị mma…. maka ndị ọzọ = (^^) =
Ọ bụghị na m bụ BAa vuzcanDDop mana weno 3 <0 !! = (* _ XNUMX) =
Ọ bụrụ na nke a na-enyere ndị demos, nsogbu adịghị !! anyway, daalụ
Daalụ, ha nyeere m aka naanị ihe m chọrọ. ka ọ dị;)
Ndewo, enwere m nsogbu na ọ bụ na mgbe m pịa ụzọ dị mkpụmkpụ nke m nwere na desktọọpụ gaa na diski dị na mpụga, ọ naghị emepe ya na diski ndị ọzọ ma ọ pụta na ihuenyo ahụ, «Iji wụnye na hazi usoro mmiri , Jiri akara ogwe njikwa »Agbalịrị m ma enwebeghị m ike ịme ya. Daalụ n'ọdịnihu.
hello ọ baghịrị m uru
O jere m ozi ọtụtụ ihe, daalụ, gaa n'ihu
email m bu jhoncena_12_6@hotmail.com tinye m 8 ======= D
Mammụ agbọghọ mamacitas
Onyinye magburu onwe ya, kelee gị, debe ya.
Enwere m nsogbu, mgbe m pịa na folda windo ọchụchọ ọzọ na-egosi, otu esi agbanwe nhọrọ imeghe kama ị na-achọ site na nchịkọta menu? Ma ọ bụ otu esi emepụta ihe maka folda ahụ iji mepee? Daalụ
nke a chid0o mgraxis hey jeere m ozi
Ndewo, achọrọ m ka ị nyere m aka biko, achọrọ m usoro iji gbanwee paragraf site na iji menu ntụzịaka .. Enwere m olileanya na ị nwere ike inyere m aka !!
O nyeere m aka nke ukwuu ... echere m na agaghịzi m achọta ozi m chọrọ ... ruo mgbe m chọtara ibe a ... ekele
ibe a di nnukwu ekele
(S) nwee (n) ezigbo abalị
wụnye ọba akwụkwọ regsvr32 C: windowssystem32crviewer.dll na windo 7
mgbe ị na-eme ya, ọ na-agwa m koodu njehie 0x80020009 ndị a
Nwere ike inyere m aka idozi ya?
Daalụ maka nlebara anya gị.
Lee m anya dijo
hello grax maka ozi otu puku ekele
Daalụ, ọ nyeere m aka ịhụ etu esi emepụta menu ihe na ihe ọ na-emere anyị amara.
Zaghachi laura cecilia cruz dela cruz
Daalụ maka ozi dị m ezigbo mkpa, daalụ nke ukwuu
Zaghachi EIFFEL JEFELSON
Ogbe 75 dijo
Ndewo, menu ihe ndị dị na Internet Explorer anaghị arụ ọrụ maka m, kedụ ihe m nwere ike ịme? Ọ bụ mgbe arụnyere Internet Explorer 8. Ha etinyewo ngwa mgbakwunye a na - akpọ ome osooso na echere m na ọ bụ ihe nwere nkwarụ bọtịnụ aka nri nke oke ahụ naanị na ịntanetị. daalụ
Zaghachi pucherete 75
onye ndu dijo
ekwughị ihe na-adọrọ mmasị
Ekele m ndị mmadụ na etiti usoro Barranquilla
Ụlọ ọrụ JAZMIN MENDEZ INCLAN dijo
Ndewo a CHIDA unu PAG. N'elu niile LÑA PHRIS JEJEJEJEJ
Zaghachi JAZMIN MENDEZ INCLAN
Daalụ nke ukwuu, ọ na-atọ ụtọ ma o nyerela m aka nke ukwuu
Zaghachi ka amaghi
olee ihe na-adọrọ mmasị ma nwee nghọta, daalụ nke ukwuu
Zaghachi ka brunno
I meela nke ukwuu, ọ nyeere m ezigbo aka maka ọrụ nyocha m
onye chukwu na enyere m aka na gini bu screen screen
ekele egbu egbu mmanya bye
chido guey jere m ozi icheta ihunanya na ekele udo na ese foto ụwa m
si ozo kele sakura gwa ya na esim si mex kele ndi agadi nwanyi ohu nke ihunanya kwuru goodbye
luci na savi dijo
ps ozi a jere anyị ozi
n'ihi na anyị informatics ọrụ
Daalụ nke ukwuu ma anyị nwere olile anya na mgbe anyị nwere
ọrụ ọzọ gbasara okwu a ebe a ka anyị chọọ nke ọhụrụ
ozi ... ekele *****
Zaghachi luci na savi
Ọfọn, ọ baara m uru, ọ bụrụ na maka nke ọzọ
Ha nwere ozi dị mkpa karịa
Ezigbo Ihe !!
kedụ ihe nzuzu, Abụ m gaaaayyyyy !!!!
M Huru Unu n’anya !! ahụrụ m n'anya
Zaghachi iji denisse
hello well, nke bu eziokwu bu, ihe omuma gi abaghi ​​uru nye m obim nwute na obu eziokwu ok
gaba n'ihu mma ndo hahahahahahahahahahahahahaha
ihe a ochi ị kwesịrị
Ndewo ebe ahụ!! Enwere m nsogbu ịsụgharị enyemaka izarq.. Enweghị m ike iji ya ma ọ bụrụ na aghọtaghị m ihe ọ bụla !! Enwere m olileanya na ị ga-enyere m aka ịkele !!!
o nwere ozi di nma mana echere m na odi nma igbakwunye obere ihe omuma
Ke cool bụ ihe niile mana ọ ga-aka mma ma ọ bụrụ na ha nyere atụ, ụmụ be anyị ekwenyeghị na ya ???????????
Zaghachi ka LUPE
Ana m achọ ọrụ
o nyeghị m aka
Obi uto dijo
Ndewo. Nwere ike inyere m aka biko? Enwere m ajuju n’ule m aghọtaghị. Ọ na-edepụta nhọrọ dị iche iche dị na menu nke menu mmalite na Windows Vista, gịnịkwa ka onye ọ bụla na-eme? Nyere m aka…
Ndewo Ọ ga-amasị m ịmara otu esi ahazi menu gburugburu maka ule nke ụlọ akwụkwọ
Ndewo Achọrọ m enyemaka dị oke mkpa maka ọrụ ma ọ bụrụ na ị nwere ike ịza m taa nke ka mma ...
Ọfọn, ha jụrụ m maka ọdịiche dị n'etiti menu okwu nke windo faịlụ na windo folda, mana enweghị m ike ịchọpụta nke bụ nke m ga-etinyekwa nha anya, mana ebe m amaghị windo ndị, Agaghị m amata otu esi amata ha, gwa m opekata mpe windo biko biko daalụ ...
Ana m ekele gị nke ọma maka ịme ụdị ozi a, nke akọwapụtara nke ọma, ana m enye gị 100
lee akwa okooko osisi a kọwara m
Daalụ, m na-eje ozi nke ukwuu
FENKIU WAVE IHE BERE BERDAD AJ SGH THIS IHE A N ’N’IHI NA Ọ B FOR N’IWU IWU
Daalụ maka enyemaka gị :)
Zaghachi ka andreiiitha
Olaa no na klas o nyere m aka zuru ike .. Daalụ
Nke a nyere m ọtụtụ ekele, nke a mere ka m nweta ọkwa dị mma mana erughị m eru n'ihi na m piomiri ya 🙂
Ndewo. Maka ọrụ ha jụrụ m: 8. Depụta ọdịnaya nke menu ndị gbara ya gburugburu nke desktọọpụ Windows.
ONYE Ọ B KN MAARA OTOW EGW ED N’IWU NKE CONTEXT MENU?
hi, ị nwere ike inyere m aka na ajụjụ a ...
Kedụ ka e si ekewa ihe ndị mejupụtara (Excel)? ...
ndewo, ị nwere ike inyere m aka na menu mmapụta biko
Ihe ojoo ha nyere m 1 maka nke ahụ
Ihe ọma ha nyere m 5 maka nke ahụ
hello enwere m nsogbu na menu okwu m na okwu, mgbe m pịa aka nri ọ na-apụta mana ọ ga-apụ n'anya ozugbo ... biko mmadụ nwere ike inyere m aka
Nzaghachi to dina musa